June 29, 2012 – democracy for burma
RCSS_SSA- DRUG ERADICATION PLAN -SHAN-ENGLISH
On June 29, 2012 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Shan State Army ‘South’SSA sends protest letter after 24th clash
FRIDAY, 29 JUNE 2012 14:07 S.H.A.N.
The Shan State Army (SSA) ‘South’ sentaletter of protest to Gen Soe Win, Deputy Supreme Commander and Commander of the Burma Army, yesterday followingaclash which took place in Laikha, Shan State South, on Wednesday, 27 June.
On the other hand, the Restoration Council of Shan State / Shan State Army (RCSS/SSA), as the SSA South is officially known, has been allowed to hold public consultations on current political, military, social and economic situation by Naypyitaw. It was also been discussing with state level Central Committee for Drug Abuse Control (CCDAC), Burma’s answer to the US Drug Enforcement Administration (DEA) and Thailand’s Office of Narcotics Control Board (ONCB). Both sides so far have agreed that cooperation from all state agencies, especially the military, is necessary, ifameaningful result is to be achieved on the drug front.
Rohingya -BROUK- gaving false information to ” all party parliamentary group for democracy in Burma” in the British parliament !!
On June 29, 2012 July 2, 2012 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
So-called rohingra are gavingafalse information to ” all party parliamentary group for democracy in Burma” in the British parliament atasmall room.
တနေ့ကတောင် အမေရိကန်အစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးဌာနပြောခွင့်ရသူ Ms Nuland က Rohingya Stateလို့သုံးနူန်းတာတွေ့လိုက်တယ်။ သူတို့လုပ်ရပ်တွေက ထိရောက်မူ့ရှိတယ်ဗျ။ ပိုက်ဆံတွေလိုသလောက်သုံးစွဲနိုင်ခဲ့လို့ဘဲ ဒီလိုအောင်မြင်မူ့တွေရတာပေါ့။ ဒီဗွီဘီ၊ဘီဘီစီ ဧရာဝတီတို့လို မြန်မာနိုင်ငံသားပုံရိပ်ရှိတဲ့အတိုက်အခံမီဒီယာတွေ စစ်အာဏာရှင်စံနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတစိတ်တပိုင်းအဖြစ် ရိုဟင်ဂျာတွေကို စစ်အစိုးရကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အသုံးချခဲ့ရာကနေ အမေရိကန်၊ အီးယူ၊ ယူအန်အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ အန်ဂျီအိုတွေ၊ အလူုရှင်တွေကပါ သနားကရုဏာသက်သွားလို့ ခုအခြေအနေအထိဖြစ်သွားရတာပါ။ ငွေပေးလို့ရနိုင်တဲ့ဟာတွေရှိသလို တပြားမှမကုန်ဘဲနဲ့ အလကားကြော်ငြာပေးခဲ့ကြလို့ ရိုဟင်ဂျာတွေအမြတ်ထွက်သွားကြတယ်။
သိပ်မကြာခင်မှာ မြန်မာအစိုးရက ဒီဖြစ်ရပ်တွေကိုဖွင့်ချတော့မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ ကေ့စ်တခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက် အချိန်လိုပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ အဖမ်းအဆီးတွေရှိနေတယ်။ အဓိကဇတ်လိုက်တွေဖြစ်နိုင်တဲ့ UNHCR တာဝန်ခံတွေ၊ အဲဒီဝန်ထမ်းတွေNGO အဖွဲ့တွေရဲ့ခေါ်တောဝန်ထမ်းတွေ၊UNO, RSO,အယ်လကိုင်းဒါးနဲ့ဆက်စပ်မူ့တွေ၊ လက်နက်သိမ်းဆည်းမူ့တွေအပါအဝင် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသကို မူဆလင်ပိုင်နက်နယ်မြေ့ပုလုပ်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေလဲပါနိုင်ပါတယ်။မိုးရွာတာကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်၊ ခုပြသနာအေးသွားတာ မိုးရွာတာကပိုအဓိကကျပါတယ်။ တနေ့ကတောင် မောင်တောမှာ ရဲတယောက် သေနတ်အလုခံရသေးတယ်။ ဘယ်လောက်အတင့်ရဲသလဲ။ မြေပုံမှာလဲ သောက်သုံးရေကန်ကိုအဆိပ်ခပ်တယ်လို့ အလဲဗန်းသတင်းတက်လာတယ်။လောလောဆယ် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတိုးတက်ရေးပါတီတင်ပြထားတဲ့ တတိယနိုင်ငံအစီအစဉ်ကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ သူတို့ကို အမေရိကန်ကလက်ခံမလား၊ အော်ဇီလား၊ မလေးရှားမှာရှိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာနာမည်ခံဘင်္ဂလီတွေကိုတော အမေရိကန်က လက်ခံနေတယ်လို့ကြားရတယ်။ ရခိုင်ဘက်က ဘကုန်းတွေကိုလဲ အမေရိကကိုပို့လိုက်ပါ။ အဲဒီချိန်ကျမှ အမေရိကမှာRohingya State ပေးလိုက်ကြပေါ့။
burma.We don’t have any ploblem with religious.If they come to your